အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ရငျကို ထပျခါ ထပျခါ ဗွောငျးဆနျသှားစမေယျ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အမိုကျစားပုံလေးမြား – Shwe Ba
အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ရငျကို ထပျခါ ထပျခါ ဗွောငျးဆနျသှားစမေယျ့ ဝါဆိုမိုးဦးရဲ့ အမိုကျစားပုံလေးမြား
Shwe Ba | February 10, 2021 | Cele News | No Comments
အခု မှာလညျး ဝါဆို က သူမရဲ့ ဆံပငျ အတိုနဲ့ ရိုကျ ထား တဲ့ ပုံလေး တှကေို ပွနျ တငျ ထားတာ ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ပရိသတျ တှေ အတှကျ ဆိုဆိုရဲ့ မိမိုကျ လှနျးတဲ့ ပုံ တှကေို တငျဆကျ ပေး လိုကျ ရပါတယျ နျော ။ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး အလှတှေ နဲ့ ပရိသတျ တှကွေားမှာ ရပေနျးစား နသေူလေး ကတော့ မငျးသမီး ခြောလေး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ဝါဆိုဟာ သရုပျ ဆောငျ အလုပျတှေ သာ မကပဲ ဂီတ ဘကျမှာ လညျး ထူးခြှနျသူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါ တယျ ။ သူမ က တော့သရုပျဆောငျ ပိုငျးမှာ လညျး ကာရိုကျတာကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျ နိုငျတဲ့သူ တဈဦးပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ဆိုဆို ဟာ ဗီဒီယို ကားတှေ ခတျေကလညျး သူ့ရဲ့ ဇာတျကားတိုငျး ဟာ အားပေးမှုကို အပွညျ့ ရထားတာ ဖွဈပါ တယျ … .
အမှာတော့ သရုပျဆောငျ ပိုငျးတှေ လြော့နညျး သှားပမေယျ့ အနုပညာ အလုပျတှကေို တော့မပွတျ လုပျကိုငျ နတောဖွဈ ပါတယျ ။ လတျတလောမှာ လညျး ကွျော ငွာလေး တှေ ရိုကျ ကူး ဖွဈနေ တာပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ ညှို့ယူဖမျး စား နိုငျလှနျး တဲ့ မကျြဝနျး တဈစုံ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး အမိုကျစား ကောကျကွောငျး တှကွေောငျ့ ပုရိသတှေ ကွှနေေ ရသူလေး က တော့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ခြောလေး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ဖွဈပါ တယျ ။ သူမဟာ ကလေး ဘဝ ကတညျး က အနုပညာ အလုပျ တှေ ကို လုပျကိုငျ ခဲ့သူ တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ ဝါဆို ဟာ သရုပျဆောငျ အလုပျ ကို သာမကဘဲ သီခငျြးဆို လညျး ကောငျးသူ တဈယောကျ လညျး ဖွဈပါ တယျ … .
ဝါဆို ရဲ့ ဖကျရှငျ လေးတှေ ဟာလညျး အမွဲ လိုလို ကောကျကွောငျး အလှတှကေို ပျေါလှငျ စတောကွောငျ့ အားလုံး က လညျပွနျ မကွညျ့ဘဲ မနေ နိုငျအောငျ ကို မိုကျလှနျး နတောလညျး ဖွဈ ပါ တယျ ။ ဆိုဆို ဟာ လတျတ လောမှာ အနုပညာ လှုပျရှားမှု တှေ မရှိသေး ဘဲ ခရီး ထှကျနတော လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ လှုပျရှားမှု လေး တှကေို လညျး လူမှုကှနျ ယကျ စာမကျြနှာ မှ တဈ ဆငျ့ ဝမြှေပေး နေ ရတာ လညျး ဖွဈပါ တယျ ။ အခုမှာ လညျး သူမရဲ့ လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြနှာ မှာပုံလေး တှေ တငျထား တာပဲ ဖွဈပါ တယျ နျော … .
အခု မှာလည်း ဝါဆို က သူမရဲ့ ဆံပင် အတိုနဲ့ ရိုက် ထား တဲ့ ပုံလေး တွေကို ပြန် တင် ထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ပရိသတ် တွေ အတွက် ဆိုဆိုရဲ့ မိမိုက် လွန်းတဲ့ ပုံ တွေကို တင်ဆက် ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် ။ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစား နေသူလေး ကတော့ မင်းသမီး ချောလေး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဝါဆိုဟာ သရုပ် ဆောင် အလုပ်တွေ သာ မကပဲ ဂီတ ဘက်မှာ လည်း ထူးချွန်သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ လည်း ကာရိုက်တာကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့သူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဆိုဆို ဟာ ဗီဒီယို ကားတွေ ခေတ်ကလည်း သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်း ဟာ အားပေးမှုကို အပြည့် ရထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် … .
အမှာတော့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းတွေ လျော့နည်း သွားပေမယ့် အနုပညာ အလုပ်တွေကို တော့မပြတ် လုပ်ကိုင် နေတာဖြစ် ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာ လည်း ကြော် ငြာလေး တွေ ရိုက် ကူး ဖြစ်နေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ ညှို့ယူဖမ်း စား နိုင်လွန်း တဲ့ မျက်ဝန်း တစ်စုံ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း တွေကြောင့် ပုရိသတွေ ကြွေနေ ရသူလေး က တော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး ဝါဆိုမိုးဦး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမဟာ ကလေး ဘဝ ကတည်း က အနုပညာ အလုပ် တွေ ကို လုပ်ကိုင် ခဲ့သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဝါဆို ဟာ သရုပ်ဆောင် အလုပ် ကို သာမကဘဲ သီချင်းဆို လည်း ကောင်းသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
ဝါဆို ရဲ့ ဖက်ရှင် လေးတွေ ဟာလည်း အမြဲ လိုလို ကောက်ကြောင်း အလှတွေကို ပေါ်လွင် စေတာကြောင့် အားလုံး က လည်ပြန် မကြည့်ဘဲ မနေ နိုင်အောင် ကို မိုက်လွန်း နေတာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဆိုဆို ဟာ လတ်တ လောမှာ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှု တွေ မရှိသေး ဘဲ ခရီး ထွက်နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ လှုပ်ရှားမှု လေး တွေကို လည်း လူမှုကွန် ယက် စာမျက်နှာ မှ တစ် ဆင့် ဝေမျှပေး နေ ရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ အခုမှာ လည်း သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ မှာပုံလေး တွေ တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော် … .